Fahafatesana mampiahiahy… : Kaomorianina iray hita faty nihantona | NewsMada
Fahafatesana mampiahiahy… : Kaomorianina iray hita faty nihantona
Par Taratra sur 05/12/2017
Nihantona tamin’ny tady, efa tsy nisy aina intsony. Izany no nahitan-dramatoa vadiny, ity teratany kaomorianina tao an-tranony, tao amin’ny fokontany Fiofio, Mahajanga, ny faran’ny herinandro. Tsy fantatra mazava na namono tena , na maty novonoina.
Teratany kaomorianina, 30 taona, manambady vehivavy malagasy no hita faty tao an-tranony tany amin’ny fokontany Fiofio Mahajanga, omaly vao maraina be. Voalaza fa hita nihantona tamin’ny tady tamina hazo iray tamin’ny valin-drihana izy. Nilaza ilay ramatoa vadiny rehefa nanontanian’ny polisy fa tamin’ny 3 ora maraina izy no nahita ilay rangahy nihantona, raha sendra nifoha tampoka. Araka ny filazan’ny mpitandro filaminana, mampiahiahy ity fahafatesana ity. Nilaza ilay vadin’ny maty fa nifamaly izy roa talohan’izao. Natory avy eo ary izao nitrangana fahafatesana izao. Noheverina fa namono tena ilay Kaomorianina kanefa ny endriky ny fahafatesany voalaza fa mampiahiahy. Teny an-toerana ny polisy sy ny BMH nanao ny fizahana ny razana. Misokatra ny fanadihadiana momba ny raharaha.
Marihina fa tao anatin’ny roa herinandro, olona dimy samihafa no namoy ny ainy tamin’ny fomba mampiahiahy tany Mahjanga ary mbola andrasana ny valin’ny fanadihadiana. Ny iray maty an-drano teny amin’ny Village Touristique, ny iray faty nihantona tamin’ny honko teny Antsahabingo, ny iray hafa teny amin’ny fokontany Aranta izay nisy nilaza fa nangalatra manga ary maty tao anaty rano no niafarany. Iray hafa koa teny amin’ny “Poteau Mainty” teny.
Amin’ny ankapobeny, milamindamin-dratsy ny ao Mahajanga ao raha resaka tsy fandriampahalemana. Tsy fahita firy any an-toerana ny vonoan’olona raha tsy tato ho ato. Toy izany koa ny fanafihan-jiolahy. “Milamina foana aty, ary matetika ny olona mody alina avokoa, na ireo mpiala sasatra any an-toerana aza”, hoy ny fanazavana avy amin’ny manampahefana. Efa misy rahateo ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana amin’ny fisafoana amin’ny alina. Momba ity fahafatesana kaomorianina ity, mandeha ny fanadihadiana. Efa fito taona izy io no monina tany Mahajanga, kanefa tsy manana taratasy mazava. Misokatra ny famotorana momba azy sy ny vadiny.